Gunners oo u geed fariisatay qannaaska Alexandre Lacazette (Imisa geni ayay Gunners wax ku goobaysaa?) – Gool FM
(Lyon) 09 Juunyo 2017 – Kooxda Arsenal ayaa u diyaar ah inay dalab horaad u dirto qannaaska Lyon ee Alexandre Lacazette iyadoo The Sun lagu qoray in macallinka Gunners ee Arsene Wenger iyo Xoghayaha Fulinta ee Arsenal ee Ivan Gazidis ay la kulmeen madaxwaynaha Lyon jaalle Jean-Michael Aulas si ay ugala hadlaan Lacazette.
Wenger ayaa doonaya inuu hujuumkan todobaadkii faraqa ugu shubo qiyaastii £200,000 si uu u keeno Emirates, iyadoo TMW uu qorayo in Arsenal ay la diyaar tahay khidmad dhan £35m (€40m) si ay usoo xera geliso Lacazette.
Weerarkan ayaa horay uga hadlay mustaqbalkiisa isagoo sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ka dheelo Premier League.
“Koobka Champions League waa muhim balse aasaasi uma aha kooxda aan ku biirayo haatan,” ayuu yiri Lacazette oo raacshey. “Premier League waa mid xiise badan, waase inaan eegaa koox aanay ku sugnayn laacibiin badan oo booskayga ah si aan binji la ii gelin,.”